Fanadinana CEPE : Tanterahina amin’ny 14 aogositra ho avy izao -
AccueilRaharaham-pirenenaFanadinana CEPE : Tanterahina amin’ny 14 aogositra ho avy izao
Efa voatonta avokoa ny laza adina hiatrehana ny fanadinam-panjakana CEPE izay atao ny 14 aogositra ho avy izao. Efa miroso amin’ny fanapariahana ireo laza adina any amin’ny Dren amin’ny faritra rehetra manerana ny Nosy araka izany ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena amin’izao fotoana izao. Ireo faritra lavitra no nanapariahana mialoha ireo laza adina CEPE, araka ny fanazavan’ny talen’ny teknolojia sy ny serasera eny anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, Tsitoara Serage Thierry, raha toa ka efa miandalana ny eto afovoantany sy amin’ny faritra manodidina. Nohamafisiny ihany koa fa voatazona ary tsy miova ny datim-panadinana hanatanterahana ny fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC. “Raha ny fanomanana fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC dia efa mandeha araka ny tokony ho izy. Ny faritra somary lavitra, toa ny faritany Antsiranana, Toliara, ny ankamaroany dia efa nahazo laza adina izay efa any amin’ny tompon’andraikitra tsirairay avy. Ny faritra manodidina toa ny, Vakinankaratra, Analamanga, Itasy, Bongolava dia eritreretina manomboka amin’ity herinandro ity no fakana ny laza adina ety anivon’ny tompon’andraikitra. Marihina fa alaina eny anivon’ny Dren ny aty amin’ny faritra manodidina. Hamafisiko etoana fa tsy miova ny datin’ny fanadinam-panjakana fa amintsika miteny izao dia voatazona fa amin’ny 14 aogositra 2018 no hanaovana ny fanadinam-panjakana CEPE ary ny 3 hatramin’ny 6 septambra 2018 ny hanatontosana ny fanadinana BEPC”, hoy hatrany ny fanazavan’ny Tsitoara Serge Thierry.
Nambarany ihany koa fa miara-miasa akaiky amin’ny mpitandro filaminana nandritra ny famolavolana ny laza adina, ny fanontana, ary ny fanapariahana ny laza adina ny eo anivon’ny minisitera ka tsy misy ny olana ny amin’ny fanatanterahana ny asa. Miantso ny fahendren’ny tsirairay ihany koa ity tale ity mba hahatontosana ny fanadinam-panjakana mba ho tombontsoan’ny taranaka malagasy. “Tsy misy ny olana. Ny dingana rehetra izay atao amin’ny fanomanana ny fanadinam-panjakana dia hiarahana amin’ny mpitandro filaminana, ny zandary, ny polisy ary ny CIS. Tsy maintsy misy mpitandro filaminana foana na amin’ny famolavolana ny laza adina, na ny fanontana ny laza adina, na ny fitondrana laza adina any anivon’ny faritra tsirairay avy. Rehefa tonga any amin’ny faritra ihany koa dia tsy maintsy mbola misy mpitandro filaminana miambina ny laza adina. Eto dia miantso ny fahendren’ny mpampianatra mba tsy hanelingelina izany fanadinam-panjakana izany satria ny ho avin’ny zanantsika, ary zanaka iraisana ireny ka tsy maintsy atao izay hahavitan’ny fanadinam-panjakana amin’ity taona 2018 ity”, hoy ihany ity tale ity.
Mahasika ny adina ara-panatanjahantena BEPC indray kosa, dia nomarihiny fa nanaiky hanao ny EPS ireo tompon’andraikitra amin’izany fa miandry daty izay hifanarahana. Hatreto dia fantatra fa Cisco 82 amin’ny 114 no efa nahavita ny azy fa ny an’Antananarivo renivohitra, dia mbola tsy fantatra ny hanatanterahana azy. Ho an’i Maevatanàna izao dia fantatra fa amin’ny 9, 10, 11 aogositra ho avy izao no hanatanterahana ny EPS Bakalorea raha toa ka ny 6, 7, 8 aogositra no hanaovana ny EPS BEPC. Ho an’i Mahajanga indray dia 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 aogositra no hanatontosana ny EPS Bakalorea, raha amin’ny 20 aogositra kosa ny EPS BEPC. Ny 6 aogositra ho avy izao kosa no hanaovana ny EPS Bakalorea ho an’Antsirabe I sy II. Momba ny fampianarana izay hatrany moa dia nanao fanambarana ny sendika ny Anefa izay tarihin’ny Randrianjafy Elidiot, omaly antoandro, teny amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena fa hampitsahatra ny fitokonana ary hanohy ny fampianarana. Ny fahitana ny tsy fihemoran’ny fanjakana amin’ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana sy ho an’ny tombontsoan’ny zaza malagasy no nambara fa antony fandraisana ny fanapahan-kevitra. Tsy misy olana ny fanatrarana ny fandaharam-pianarana araka ny nambara satria marihina fa nianatra foana ireo kilasy hanala fanadinana hatramin’izay, ary ny famerenana no hamafisina tsara. Amin’izao fotoana izao moa dia EPP 2 amin’ny 95 sisa no mbola tsy namoha ny varavarany dia ny EPP Amboniloha sy Tsarahonenana. Efa mianatra avokoa ny CEG 15 sy Lisea 7 eto an-drenivohitra.